डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ लुट्ने खेलबहादुर र रेलबहादुरको गिरोह पक्राउ - नेपालबहस
डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ लुट्ने खेलबहादुर र रेलबहादुरको गिरोह पक्राउ
| १९:२३:३० मा प्रकाशित
११ असोज, भक्तपुर । डलर भन्दै कागजको पोको दिएर लाखौ रुपैयाँ लुट्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । अहिलेसम्म डलर भन्दै कागजको पोको दिएर आधा करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लुट्ने सिन्धुपाल्चोक घर भएको गिरोह पक्राउ परेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका ३६ वर्षीय खेलबहादुर तामाङको गिरोह छ । उनीसँगै ३३ वर्षीय रेलबहादुर तामाङ, ५६ वर्षीय श्यामबहादुर तामाङ, २५ वर्षीय रामकृष्ण तामाङ र ३२ वर्षीय कान्छी तामाङ पनि पक्राउ परेका भक्तपुरकी एसपी तारादेवी थापाले जानकारी दिइन् ।
यसरी डलर भन्दै रकम लुट्ने गिरोहमा अधिकांश बाह्रविसे नगरपालिकाका छन् । रेलबहादुर र खेलबहादुरको यो गिरोहले अहिलेसम्म ५५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको एसपी थापाले बताइन् ।
गिरोले केही महिनायता ५ जनाभन्दा बढीलाई ठगी गरेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि छानबिन थालेको प्रहरीले केही दिनयता गिरोहका मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुको साथबाट केही रकम र मोबाइल समेत बरामद गरिएको छ ।
अनलाइनबाट हुने ठगीप्रति विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध ३ महिना पहिले
फेसबुक प्रयोगकर्ताबीच म्यासेन्जरमा कुराकानी, ख्याल गर्नुस्, ठगिनुहोला ! ३ महिना पहिले
स्वयम्भुबाट मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ९० हजार माग्ने पक्राउ ४ महिना पहिले
विदेशबाट फर्केका श्रीमानको हत्या गरेपछि श्रीमतिले किन गरिन आत्महत्या ? ४ महिना पहिले
रसुवाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्दै २ दिन पहिले
आजदेखि मकवानपुरमा चार स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा २ हप्ता पहिले
निर्णायक छलफलमा जुटदै कांग्रेस र माओवादी ३ हप्ता पहिले
लुम्बिनीमा हर्स ट्रेडिङ २ हप्ता पहिले
घरेलु मदिरा बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन अध्ययनका लागि पत्र हस्तान्तरण ३ हप्ता पहिले
छुइगोठमुक्त अभियानमा जुटे स्थानीय महिला ३ हप्ता पहिले
निर्माणाधीन खानेपानीको संरचना ५ दिन पहिले
प्राविधिक समस्याले सेवा अबरुद्ध भएकोमा रिचार्जरको क्षमा याचना १ दिन पहिले
तीस हजार बढीले बुझे करिब तीन अर्ब रूपैयाँ कोरोना बीमा दाबीको भुक्तानी (विवरणसहित) ४ महिना पहिले
सचिवालय बैठक माग गर्दै प्रचण्डसहित पाँच नेताको लिखित माग ६ महिना पहिले
तरकारी खेतीले धानेको नमूना गाउँ ‘पित्लेक’ २ महिना पहिले